ငမိုးရိပ်ချောင်းအတွင်းမှ လမုသီးသန္ဓေသား | ပဲ့တင်သံဂျာနယ်
ပဲ့တင်သံဂျာနယ် သတင်း • သတင်းဝတ္ထု • အဖွင့် 8 Comments
ညီငယ်လေးဆိုတဲ့ ငနာလေ။ အခုတလောမှာ မဟန်တာတွေ ကြုတ်ပြီး မဟုတ်တာတွေ ကြံနေတာတော့ အမှန်ပဲ။ နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာတွေ၊ အပတ်စဉ်ထုတ်ဂျာနယ်တွေ ဖတ်ပြီးတိုင်း ငူတူတူငိုင်တိုင်တိုင်နဲ့ ဖြစ်နေတာကြာလှပေါ့။ သတင်းစာတွေ၊ ဂျာနယ်တွေကိုလည်း ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ မကြုံစဖူးထူးကဲလှစွာ ဝယ်ယူဖတ်ရှုနေတာ လူတိုင်းအသိ။ ဒါတင်မကသေးဘူး။ သူ့ရပ်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် စာဖတ်ခန်းက ဂျာနယ်တွေကို တစ်စောင်မကျန် သဲသဲမဲမဲဖတ်တယ်။ တချို့သတင်းတွေဆို သူ့ရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းမှာပါတဲ့ ကင်မရာနဲ့ ရိုက်ယူစုဆောင်းနေတာကိုလည်း တွေ့ရတယ်။ ဒါကိုပဲ ခုတလောနာမည်ကြီးနေတဲ့ ရန်ကုန်မြို့သစ် စီမံကိန်းကြီးလို ဧရာမစီမံကိန်းကြီးတစ်ရပ် အကောင်အထည်ဖော်နေပုံမျိုး ထမင်းမေ့၊ ဟင်းမေ့၊ အိုးမေ့ အိမ်မေ့၊ သားမေ့ မယားမေ့လုပ်နေတာ တစ်လနီးပါးရှိလှပေါ့။ ညီငယ်လေးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ သူ့ရပ်ကွက်ထဲမှာ နာမည်ဆိုးပေါက်ပြီးသား။ စကားကြီး စကားကျယ်တွေ ပြောတာကလွဲလို့ လက်ကြောမတင်း ခြေကြောမတင်း၊ ခါးမကျိုး ထောင့်မကျိုး သတ္တဝါရယ်။
ဟော… ကြည့်စမ်းပါဦး။ ခုတော့ အဲဒီငနာက မြန်မာတင်မကဘဲ တစ်ကမ္ဘာလုံးသိမ့်သိမ့်တုန်သွားစေတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်ကို ထုတ်လွှင့်လိုက်လေပြီ။ ကမ္ဘာ့မီဒီယာတွေမှာ အချိန်နဲ့အမျှ
ညီငယ်လေးပဲ။ IS အကြမ်းဖက်အဖွဲ့သတင်း…နားထားလိုက်။
ယူကရိန်း- ရုရှားပြဿနာ… ဝေးဝေးနေ။ အီဘိုလာကူးစက်ရောဂါ…ကျန်ခဲ့ပြီ။
ပုဒ်မ-၄၃၆… ကြာပေါ့။ PR စနစ်….သွားစမ်းပါ။
အပတ်စဉ်ထုတ်ဂျာနယ်တစ်စောင်ဖြစ်တဲ့ ပဲ့တင်သံဂျာနယ်က သတင်းတစ်ပုဒ်ကြောင့် ကမ္ဘာ့မီဒီယာတွေ မျက်လုံးပြူးကုန်ကြတယ်။ အိုဘားမားမျက်ဖြူဆိုက်သွားတယ်။ ပူတင်ဟာ ငါးပူတင်းကုန်းပေါ် ရောက်သလို တဆတ်ဆတ်တုန်လှုပ်သွားတယ်။ အီးယူလည်း
မီးပူလောင်ခံလိုက်ရတယ်။ အိမ်နီးချင်းတရုတ်ဆို အသံတောင်
မထွက်နိုင်တော့ဘူး။ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီလည်း မနေနိုင်တော့လို့ အရေးပေါ်အစည်းအဝေးတောင် ခေါ်ယူနေရတယ်ဆိုပဲ။
ဘာသတင်းလဲ… ကမ္ဘာကြီး ဘာဖြစ်သွားတာလဲ။
ပုဂံခေတ်၊ ပျူခေတ်မတိုင်ခင်ကတည်းက ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့
မြောက်ဥက္ကလာပ၊ မယ်လမုဘုရားသမိုင်းထဲက မယ်လမုသန္ဓေတည်ခဲ့တဲ့ လမုသီးကို ညီငယ်လေး ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့က ရှာပုံတော်ဖွင့်တော့မတဲ့။ ဒါတင်ပဲလား။ ဘယ်ကလိမ့်မတုံး။ ရှင်မွေးလွန်းနဲ့ မင်းနန္ဒာဇာတ်ထဲက မင်းသားလေး နန္ဒာ ရှင်မွေးလွန်းရှိရာ သံလျင်မြို့ဆီကို ဖွန်သွားကြောင်ရင်စီးတဲ့ စီးတော်ယာဉ် ငမိုးရိပ်မိကျောင်းရယ်။
ငမိုးရိပ်ရဲ့ အတိုက်အခံပါတီခေါင်းဆောင် မလက်တိုမိကျောင်းကိုပါ ဖမ်းပြဦးမယ်ဆိုပဲ။ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာလည်း
သူ့ကိုယ်သူ မင်းနန္ဒာဝင်စားတာတဲ့။ မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန် ဝိဇ္ဇာဓရနည်းသုံးပြီး အထက်ပုဂ္ဂိုလ်၊ အလယ်ပုဂ္ဂိုလ်၊
အောက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ဆယ်ယူမယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဒီသတင်းကို မြန်မာပြည်အတွင်းမှာရှိတဲ့ မီဒီယာအားလုံးက ဝိုင်းတွန်းကြပုံများ ညီငယ်လေးဆိုတဲ့ လူစွမ်းကောင်းကြီးက ၆ ထပ်တိုက်လောက်ရှိတဲ့ လမုသီးကို ခြေနဲ့နင်းထားပြီး
ငမိုးရိပ်ကို ညာလက်၊ မလက်တိုကို ဘယ်လက်ထဲမှာ ဖမ်းမိထားပြီလို့ ဓာတ်ပုံတွေ ဝေဝေဆာဆာနဲ့ နေ့စဉ်မပြတ်ဖော်ပြနေတော့
အမေရိကန်တွေ ကြောက်သွားတယ်။ ရုရှားတွေ ဖြုံသွားတယ်။ တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာ လူစွာလုပ်နေတဲ့ တရုတ်နဂါးကြီးလည်း ငုပ်သွားတယ်။ သူရွေးချယ်ထားတဲ့ ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ပဲ့တင်သံဂျာနယ်က အယ်ဒီတာဟန်ဇော်ကလည်း ညီငယ်လေးရဲ့
သီလ၊ သမာဓိ၊ သစ္စာစွမ်းပကားတွေကြောင့် သိကြားမင်းကြီးကတောင် ညစဉ် မပျက် နတ်သုဒ္ဓါလာလာခွံ့ကျွေးရတယ်ဆိုပဲ။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကြောက်ရွံ့တုန် လှုပ်မှုကြီး ဖြစ်သွားတာလည်း မပြောနဲ့လေ။ ဒီလိုလူစွမ်းကောင်းကို မြန်မာ တစ်ပြည်တည်းက ပိုင်ဆိုင်နေမယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာမှာ မြန်မာက ဗိုလ်ကျစိုးမိုးမှုတွေ ဖြစ်လာတော့မပေါ့။ ပြီးတော့ ဘီဘီစီတို့၊ စီအင်န်အင်န်တို့၊ အယ်လ်ဂျားဇီး ယားတို့နဲ့ အင်တာဗျူးမှာလည်း ရှိတ်စပီးယားရဲ့ ကမ္ဘာကျော်လက်ရာ ရိုမီယိုနဲ့ ဂျူးလိယက်ဟာ မြန်မာ့သမိုင်းထဲက ရှင်မွေးလွန်းနဲ့ မင်းနန္ဒာဇာတ်လမ်းကို ခိုးချ ထားတာဖြစ်လို့ အင်္ဂလိပ်တွေကို တရားစွဲမယ်ဆိုပဲ။ ဂရိတ်ဗြိတိန်ဟာ ဝမ်းနည်း ခြင်းအထိမ်းအမှတ် အဖြစ် ချက်ချင်းဆိုသလို အလံတိုင်တစ်ဝက် လွှင့်ထူလိုက် တော့တယ်။ ကမ္ဘာကြီး ပြားရုံတင်မကဘဲ ပိန်လိမ်သွားပြီလို့ ဖရီးမန်းက ထအော် တော့ စတုတ္ထလှိုင်းကြီး လာလေပြီလို့ တော်ဖလာက ထအော်ပြန်ပါတော့တယ်။
ငမိုးရိပ်ချောင်းရဲ့ကမ်းပါးနှစ်ဖက်မှာလည်း နိုင်ငံတကာက လာကြည့်တဲ့ ဧည့်သည်တွေဆိုတာ နည်းမှတ်လို့။ ခြေချစရာကိုမရှိဘူး။ လူတွေများလွန်းလို့ မိုးရွာရင် မြေကြီးကို ရေမကျဘူး။ ဝေဟင်မှာတောင် တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ ကင်းစောင့်ပေးနေရတယ်။ ပရိသတ်တွေထဲမှာလည်း နတ်မိကျောင်း ခဏခဏ ဝင်ပူးလွန်းလို့ အပူးမခံရရင် ခေတ်မမီဘူးဖြစ်ရတယ်။ နတ်မိကျောင်း ဝင်ပူးပြီး ပြောတာက ညီငယ်လေးဆိုတဲ့လူ ညှစ်ထားလို့ ထွက်နေတဲ့ မိကျောင်းနှစ်ကောင်ရဲ့ လျှာဟာ ကချင်ပြည်နယ်က မြစ်ဆုံစီမံကိန်းထိရောက်နေပြီတဲ့။ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရရဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ငမိုးရိပ်ချောင်းကို မည်သူမျှ ဖြတ်သန်းသွားလာ ခွင့်မရှိဆိုပြီး ပိတ်လိုက်တယ်။ နတ်မိကျောင်းနှစ်ကောင်ကြောင့် ဘေးဥပဒ်ဖြစ်ကုန် ရင် အစိုးရမှာ တာဝန်ရှိတာပေါ့။ ညီငယ်လေးရဲ့ မြန်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန်က ခေတ်မီတယ်။ မိကျောင်းတွေကို ဘီယာတိုက်ဖို့အတွက် စည်ဘီယာတွေကို စည်ပီပါတွေမှာ ထည့်ပြီး ဘီယာပါတီပေးတယ်။ နိုင်ငံတကာက အလှမယ်တွေ ကို ရေလယ်က သူ့သင်္ဘောပေါ်ဖိတ်ပြီး ရှင်မွေးလွန်းဝိညာဉ်ကပ်၊ မလက်တို ဓာတ်စီးစေပြန်တယ်။ ညီငယ်လေးနဲ့ မယ်စကြဝဠာတွေ၊ မယ်ကမ္ဘာတွေရဲ့ လူမြင်မကောင်းတဲ့ပုံတွေ အင်တာနက်တွေမှာ ပလူပျံနေပါတော့တယ်။ သူကတော့ သတင်းထုတ်ပြန်လို့မရသေးဘူးဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းသာထုတ်ပြန်လေ့ရှိပေမဲ့ ကမ္ဘာကြီးက သူ့ကိုယုံကြည်နေဆဲပဲ။ နိုင်ငံတကာက ဧည့်သည်တွေ လာကြ လွန်းတော့ ဟိုတယ်တွေ၊ မိုတယ်တွေ ဆိုတာ ဝေးလို့။ ပန်းခြံက ထိုင်ခုံတွေ၊ ကားမှတ်တိုင်က ခုံတန်းလျားတွေ၊ လမ်းဘေးအုတ်ခုံတွေပေါ်မှာတောင် နေရာလွတ်မရှိတော့အောင် ဖြစ်ရတာ ကိုး။
ဒီအခြေအနေကို စိုးရိမ်မှုလွန်ကဲ နေရတာက ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေး ကောင်စီပေါ့။ အမေရိကန်က နျူကလီး ယားဒုံးကျည်နဲ့ ငမိုးရိပ်ချောင်းထဲကို ပစ်မယ်တကဲကဲလုပ်နေလေရဲ့။ တရုတ် က ဗီတိုအာဏာနဲ့အပြင်းအထန် ကန့် ကွယ်တယ်။ မတော် မြစ်ဆုံနားရောက် နေတဲ့ မိကျောင်းနှစ်ကောင်ရဲ့ လျှာက တရုတ်နဂါးကို သွားလျက်မိမှာ ဖင် တုန်အောင်ကြောက်နေတာပေါ့။ ဗမာ နတ်က တရုတ်နတ်ထက် ကြမ်းတယ် လေ။ လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ တံခါးပိတ် ဆွေးနွေးပွဲက ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ဘူး။ ကမ္ဘာကြီးက မျက်လုံးပြူး၊ မျက်ဆန် ပြူးနဲ့ အနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတယ်။ ဒီလိုနဲ့… တစ်လ… နှစ်လ… ပြီးတော့ သုံးလမြောက်မှာ …
ညီငယ်လေးတို့အဖွဲ့ရဲ့ပြန်ကြား ရေး တာဝန်ခံအယ်ဒီတာဟန်ဇော်က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တယ်။ ရန်သူတော်ဖြစ်တဲ့ ငမိုးရိပ်မိကျောင်းနဲ့
မလက်တိုမိကျောင်းတို့ကို တန်းတူညီမျှရေး မူဘောင်အခြေခံချမှတ်ပြီး စားပွဲဝိုင်းယဉ်ကျေးမှု၊ ခုတင်ယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ ဘီယာစုပ်လိုက်ကြတာ
ငြိမ်းချမ်းရေးအသီးအပွင့်အဖြစ် မိကျောင်းပေါက်ကလေးများ မီးရှူးသန့်စင်
ခွင့်ပြုချက်အရ အသိပေးလိုက်တယ်လို့ ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
ညီငယ်လေးက စီအင်န်အင်န်သတင်းဌာနနဲ့ အင်တာဗျူးမှာ
မင်းနန္ဒာဟာ ဇာတ်သိမ်းမကောင်းခဲ့ရှာဘူး။ ပျော်စရာဇာတ်သိမ်း
(Happy Ending) တစ်ခုကို
အသစ်ပြန်ရေးချင်လို့ ရန်သူတော်နှစ်ဦးကို ဘီယာမူးအောင်တိုက်ပြီး
လမုသီးသန္ဓေသားအဖြစ် ငြိမ်းချမ်းရေးဇာတ်သိမ်းကို ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တာအပေါ်
နောက်ထပ် ဘယ်လိုခြေလှမ်းတွေလှမ်းဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါသလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းအတွက်
]]ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့ ပုဂံမြို့တည်မင်းတြားကြီး အနော်ရထာကို သိကြားမင်းဆက်သခဲ့တဲ့ အရိန္ဒမာလှံကို ဆက်လက်ရှာဖွေပါဦးမယ်}}လို့
ပထမမှ မရလျှင် ကျန်တာစိတ်မဝင်စား လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် နိုင်ငံသားဘဝလုံခြုံရေး
8 comments on “ငမိုးရိပ်ချောင်းအတွင်းမှ လမုသီးသန္ဓေသား”
fx마진거래 August 13, 2020 at 8:45 pm
Havealook at my website … fx마진거래
เครดิตฟรี August 14, 2020 at 5:35 am
Thanks! Great stuff. https://like191.com/slot-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b5/
먹튀검증업체 August 20, 2020 at 11:26 pm
But wanna remark on few basic issues, The site taste is great, the articles is in reality great : D.
Chromatic Harmonica Songs Tabs August 24, 2020 at 2:03 pm
http://myturbopc.com August 28, 2020 at 4:29 pm
사설토토 August 29, 2020 at 1:59 am
Quality content is the main to invite the visitors to visit the web site, that’s what this web
자동매매프로그램 August 29, 2020 at 8:54 am
out and understand this side of the story. I was surprised that you’re not more popular since you surely possess the
My web blog … 자동매매프로그램
helpful resources August 29, 2020 at 11:40 am
me. And i am happy reading your article. But wanna statement on few normal things, The web